Intlanzi ye-Goblin: iimpawu, indawo yokuhlala, ukondla kunye nokuzala | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngentlanzi enomdla kakhulu ngeempawu zayo ekufanele ukuba uyibone ukuze uqonde wonke umgangatho wayo. Umzimba wakhe ongaqhelekanga kunye nenkangeleko ethile imenza ukuba abaluleke kakhulu. Imalunga nayo intlanzi yegoblin. Yeyosapho lwe-Opisthoproctidae kwaye igama layo lenzululwazi ngu IMacropinna microstoma. Ngokuqinisekileyo xa usazi ngakumbi ngaye uyakothuka ngokupheleleyo ziimpawu zakhe kunye nendlela aphila ngayo.
Ngaba uyafuna ukutyhila zonke iimfihlelo zentlanzi? Kule nqaku sikubonisa yonke into, ke funda ukuze ufumane.
2 Amehlo awodwa
3 Ukuziphatha, indawo yokuhlala kunye nokuhanjiswa kwentlanzi yegoblin
4 Ukuzaliswa kunye nokondla iMacropinna microstoma
Ikwaziwa njengegama lentloko yentlanzi enkosi kubume bayo obukhethekileyo. Intloko imile okwe dome ebonakalayo kuba izaliswe lulwelo olubonakalayo. Ukuba ujonga kakuhle ungayibona yonke indawo yangaphakathi Ngokufanelekileyo, sinokubona amehlo akhe, ingqondo kunye nazo zonke iziphelo zemithambo-luvo ezenza intloko yakhe. Umzimba wawo wonke uqhelekile kwezinye iintlanzi.
Yenziwe ngohlobo lwezikali ezinde ezimile okwe-V. Ngokumalunga nombala wayo, ingwevu yamagenta nomsila obonakala ngokungathi uyintloko. Nangona kunjalo, ukusuka emsileni asinakubona amalungu ayo angaphakathi kuba ayicacanga ngokupheleleyo, kodwa iyagqitha. Ingathi sifuna ukubona ngeglasi ebehleli phantsi kwamanzi okwethutyana kwaye siyifumana kunxweme lolwandle.
Umlomo mncinci kakhulu njengoko usetyenziselwa ukutya ukutya okuncinci. Inkqubo yayo yendaleko khange ivelise umlomo omkhulu kuba ayiyidingi. Iimpiko zepectoral zikwindawo esezantsi emacaleni. Zinde kwaye zicabalele kwaye ngenxa yazo zinokuhlala zihleli ixesha elide. Obu buchule buyisebenzisela ukubamba ixhoba layo ngobusela obukhulu ngaphambi kokuzitya. Nje ukuba ibone ukutya kwayo kufutshane nayo, ikhawulezisa ngokuchasene nayo ngeempiko zepectoral.
Nangona ibonakala, oko akuthethi ukuba intloko yayo ibonakaliswe kubaxhamli bayo. Ngokuchasene noko, entloko kukho ikhaka elikuvumela ukuba umelane netyhefu efumaneka kwijellyfish. Oku kungenxa yokuba kukutya kwabo kwaye kuphuhlisile eli khaka ukuzikhusela kubo.
Ngokungafaniyo nezinye iintlanzi ezidada elwandle, le goblin ayinayo indawo yokuqubha. Oku kukuvumela ukuba udade uye kubunzulu obukhulu ngaphandle kokonakaliswa luxinzelelo lwamanzi. Sifumana intlanzi malunga ne-15 cm ubude, nangona kunjalo ezinye iisampulu zifunyenwe zinokufika kwi-20 cm ubude.
Ekuboneni kokuqala, umntu unokubhideka xa ejonge entloko, kuba kubonakala imingxunya emibini emnyama. Nangona kunjalo, oku akunjalo. Imalunga namalungu ayo athambileyo apho inokubamba khona indawo kunye nomgama wexhoba layo.
Amehlo yeyona nto itsala ngokungafaniyo nezinye iintlanzi. Kwaye ziyafana neetyhubhu ezimbini eziluhlaza ezibekwe ngaphakathi kolukakayi lwakho, ukuba zibonakalise, zikuvumela ukuba ube nomfanekiso-ngqondweni wento ejikeleze wena nomgangatho opheleleyo. Ayisiyiyo kuphela eyahlukileyo kunye namehlo akhethekileyo, kodwa iyakwazi ukuhambisa onke amalungu e-tubular kulo naliphi na icala. Ngale ndlela, intlanzi yegoblin ayinayo indawo efileyo xa ihlalutya indawo edada kuyo. Zisebenza zombini ukuhlasela ixhoba lazo nokuzikhusela kumarhamncwa.
Ezinye iintlanzi ezinee-tubulars azinabo obu banzi bokubona kuba iingqayi zazo azicacanga. Inyaniso enomdla malunga nale ntlobo kukuba Ungabona macala mathathu kwisithuba okuso.
Ukuziphatha, indawo yokuhlala kunye nokuhanjiswa kwentlanzi yegoblin
Ezi ntlanzi zihlala zodwa ixesha elininzi. Azisebenzi kakhulu, kodwa zikwindawo enye imini yonke zilinde ukudlula ixhoba lazo. Inyaniso yokungahambi iyinika amandla okungaqwalaselwa ukuze ingatsali ingqalelo yexhoba layo kwaye ilinde umzuzu ogqibeleleyo wokuhlasela. Xa emi emanzini, umzimba wakhe uthe tye, kodwa amehlo akhe ajonge phezulu. Oku kukuvumela ukuba ube nembono ebanzi malunga nokuba yintoni ekuwe kwaye uzilungiselele ukulandela irhamncwa lakho.
Indawo yokuhambisa ibanzi. Singayifumana kwiindawo ukusuka ulwandlekazi lwePasifiki, ukongeza kwiAtlantic kunye neIndiya. Imimandla apho bangafumaneki rhoqo kuLwandle lweBering, eBaja California, eUnited States naseMexico.
Indawo yokuhlala yendalo ikwiindawo ezinzulu ngenxa yokungabikho kwesinyi. Elona khaya lizinzileyo lifunyenwe kwindawo ye-mesopelagic phakathi kwe-200 kunye ne-1000 yeemitha ubunzulu. Ukuba ukutya kuninzi, sinokukufumana kubunzulu beemitha ezingama-600 ngokubanzi. Inezinto ezifanayo kwaye ihlala yabelana ngendawo yokuhlala intlanzi yokuwisa. Iimpawu ababelana ngazo ngokufanayo kukukwazi ukukhubaza imizimba yabo ukuze baziqhelanise notshintsho kuxinzelelo oluvela kumanzi abangqongileyo.
Ukuzaliswa kunye nokondliwa kwe IMacropinna microstoma
Akukho lwazi lungako malunga nokuzala kwakhona. Into eyaziwayo kukuba bazala ngokufanayo intlanzi yotyando. Ayinayo i-dimorphism yesondo, ke kunzima kakhulu ukwahlula amadoda kwabasetyhini. Ukuveliswa kwakhona kwe-oviparous kwaye ukuchumisa kukholelwa ukuba kwenzeka ngendlela eyahlukileyo. Oko kukuthi, owasetyhini ubeka amaqanda kwaye eyindoda iyawafaka ngesidoda.
Amaqanda agqunywe ngethontsi leoyile eliwavumela ukuba adadeke ngaphantsi kwekhava de aqandusele. Nje ukuba bazalwe, baya emanzini anzulu.
Ngokumalunga nokutya, akwaziwa ukuba uyintoni na into oyityayo. Kodwa kunokugqitywa ukuba Ukutya kwabo okuphambili yi-jellyfish Kukhuselwe kuyo kunye neentlanzi ezincinci, ngokomlomo wayo.
Ndiyathemba ukuba enkosi kolu lwazi unokuyazi ngcono intlanzi yegoblin.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yeGoblin
Intlanzi ye-goblin ipholile kakhulu.???
Isixhobo sokuhambisa iintlanzi